Taariikhda My Butros » Adaabta Dating
Mid ka mid ah saaxiibadayda lab ii sheegay in uu mar taariikhaysan gabar oo isagoo sarqaansan maalinta ugu horeysa ee u gudbey matagi dhan ka sarraysii isaga,! Inkasta oo nasiib wanaag waxaan marnaba la kulantay aan hubo in aanu ku dhamaan lahaa taariikhaha in ay ahaayeen kaliya bannaan ka xun ahay, halkaas oo qofka wax gebi ahaanba aan habooneyn oo kaliya aad u rajeeyay dhulka furi lahaa liqa aad oo dhan. Oo anigu waxaan hubaa in quruxsan, kulligayo waxaannu nagu dhacay gooniga ah la xiro daqiiqadii ugu danbeysay oo xataa laga yaabee in la isku taagay. Plus oo aynu u wada maqleen qaldan sheekooyin naxdin ku saabsan taariikhaha ugu horeysay ka socda. Sidaas waxa ka qaldamay la xaaladood iyo sida ay taasi waa laga hortagi karaa. Waxaa dhammaan hoos yimaado inay laba erey yar 'shukaansi dhaqanka'.
Waa maxay dhaqanka shukaansi? Well Waxaan qabaa inay tahay ee sida set oo ah tilmaamaha ka imanaaya ogolaan waayo-aragnimo shukaansi si ay si habsami tago oo noqon dheeraad ah oo raaxo u leh labada qof oo ku lug leh. Dabcan waxaan marnaba xakamayn karaa qof kale waxa uu sameeyo, si aan dooran kartaa oo kaliya in ay masuul yihiin akhlaaqdeena laftigiisa ayaa noqon, oo waxaan aaminsanahay in haddii aan dooran in kale sidoo kale qof iyo sharaf dhaqanka shukaansi daweeyo haddaba heli doonnaa khibrad ah oo badan lagu farxi karo oo la maarayn karo ee nafteena shukaansi. Plus isagoo code ka mid ah dhaqanka Waayo, qudheenna ayaa kaa caawin kara in ay naga nabad ah.
Dating dhaqanka waxaa ka mid ah waxyaabo sida goorta aad wacayso, inta jeer ee aad fariin kasta oo kale, haddii aad ka jawaabtid fariin iyo telefoon kasta call, xaddidayaa waqtiyada iyo daahida taariikhaha, waxaad huwin, waxa aad kala hadli on taariikhda, marka si aad u hesho jirka, laakiin ugu muhiimsan sida aad ula dhaqmaan qofka kale iyo sida aad u filanayaan in loola dhaqmo. Sida aad arki daboola arrin tiro balaadhan oo ah dhinacyada oo sidaasuu noqon kartaa yara fahmi karin. Plus waxaad ka heli doontaa in ay dadku cayn kasta oo fikrado kala duwan oo ku saabsan waxa ay tahay iyo ma aha dhaqanka la aqbali karo marka ay timaado shukaansi, oo sidaas waxa ugu wanaagsan ee la sameeyo waa la abuuro aad gaar ah tilmaamaha kaas oo ka shaqeyn aad u, oo haddana ul iyaga. Marka aad hesho dhab halkaas oo taariikhdana qof kale ee aad u awooddo mar uun qayb tilmaamaha aad iyaga la haddii aad sidaa doorato, oo waxay ka wada hadlaan si loo hubiyo in aad ku faraxsan tahay iyo heshiis aan la sida loo soo qabtay ee midba midka kale si cadaalad ah labada jira. Tani waxay ku lug daacadnimo total iyo heer qaar ka mid ah maturity labada dadka. Waxaan aaminsanahay in haddii dadka sameeyey this dheeraad ah oo inta badan u badan jabka la lahaa.
Inkastoo Ugu horeyn, xusayaan dhaqanka shukaansiga waa idiin. Marka aan u dhaqmaan si aan dareemayaa wanaag oo ku saabsan waxa aanu ka bilaabaynaa in la ansixiyo iyo nafteena ku koraan is-ixtiraam iyo kalsooni ah.
Tusaale ahaan waxa aad go'aansan kartaa in ay tahay haboon in qof aad ku taariikhaysan kaliya hal ogaado haddii aadan u socday inay mar kale arkaan, ama waxaad go'aansan kartaa in tani aysan ahayn lagama maarmaan. Haddii aad tahay qof dumar ah oo aad dooran kartaa in aysan haysan doono galmo aad maalinta ugu horeysa ee maxaa yeelay waxa ay adiga kugu habboon aad sugtid ilaa inta aad si fiican u ogaadaan qofka. Ama waxaa dhici karta inaad leedahay dareen aad u xoog badan oo ku saabsan ma la hayaa ku sugaya taariikhaha ama fariimo la soo laabtay. Waxa ay hoos 'shukaansi dhaqanka' dhan.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tilmaamaha quruxsan caadiga ah in dadka intooda badan dooran lahaa in uu raaco oo qayb ka ah dhaqanka shukaansi:
Markasta noqo kii taariikhaha
Ha istaagaan qof ilaa daqiiqadii ugu danbeysay
Ha is ahaantii cabteen ayaa taariikh koowaad
Ha ku qaataan habeenkii oo dhan hadalka ku saabsan ex (hamaansasho)
Xiro wax ku haboon taariikhda aad aadeysid
Si toos ah Ha ka filin sex on taariikh koowaad
Dhab ahaantii dad badan ayaa si fudud u wac lahaa akhlaaq wanaag kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah diiniga kale yar ee dhaqanka-shukaansi noqon kartaa in ka badan oo degaanka ah cawlan. Sidaas qaado waqti aad si dhab ah u maleynayaa ku saabsan dhinac kasta oo shukaansi iyo samaynta xeerarka iyo tilmaamaha mid kasta. Waxaad ka dhigi karaa talabixin ah in aad taariikhda ma nin oo aad istaagto daqiiqadii ugu danbeysay sameeyo, ama waxaad samaysaa ma taariikhda haweenka kuwaas oo aad u soo daahay. Waxaad go'aansan kartaa in aadan xirtaan feydi mini on taariikh haddii aad tahay qof dumar ah, sababtoo ah aad doonayso inaad aragti dheeraad ah oo baalaha. Xeerarkan waxay noqon doonaan sida gaarka ah sida aad tahay iyo waxa ugu muhiimsan waa in ay helaan cad oo ku saabsan waxa aad jeceshahay iyo waxa aan la aqbali karin ee adiga shaqsi ah.
Haddaba sidee baad u xamili marka qof uu sameeyey wax aadan jeceleysan? Maxaad sameysaa marka qof jabiyo mid ka mid ah xeerarka aad? Sida ku xusan ka hor inta aanan koontarooli karin sida qof kale u dhaqmo mana waxaan rabnaa in aan. Sidaas daraaddeed taasu waxay hoos waa in aad waxa aad doonaysaan inaad aqbasho yihiin iyo meesha aad line waxay sawir. Tusaale ahaan mid ka mid ah tilmaamaha haddii ay tahay in aanad rabin in lagu hayo sugaya taariikhda a, oo aad leedahay qofka soo daahay, meesha koowaad ee call waa in ay iyaga ha ogaado sida aad u dareento oo arrintan ku saabsan. Waxaad ku samayn kartaa in aan lagu eedayn, hab sahlan oo ay si fudud u la wadaago sida aad dareensan tahay iyo in kale, ma aha wax aad rabto in xiriir haasaawe. Si kastaba ha ahaatee waxa ku saabsan haddii ay si joogta ah gudbaan line aad? Well aad u baahan doontaa inaad go'aan ka gaadho habka shirkad line in waxa loogu talagalay adiga. Haddii ay dhab ahaantii aad dhibto iyo inaadan u adkaysan karin habdhaqanka qofkaasi yahay, si fudud ma noqon doonto taam wanaagsan. Ka dib markii aad la wadaago sida aad dareensan tahay haddii ay weli u qaban in aad sidoo kale u baahan doontaa inaad si farxad ha tago oo cusboonaysiiso tilmaan naftaada, ama waxaad u baahan doontaa inaad sii daysid. Tani waa sida aad u horumariyaan kalsoonida naftaada iyo xuduudaha kuu gaarka ah ee.
U fiirso in qaybta ugu weyn, qodobkan oo dhan waxaan ugu yeedhnaa 'tilmaamaha' oo aanay aheyn 'xeerarka'. Tani waa sababta aan u malaynayaa in ay muhiim u tahay in aad leedahay dabacsanaan qaar naftaada marka la eego tijaabinayaan oo ay arkeen waxa uu dareensan yahay in OK kuu ah iyo waxa hubaal ah waa mid aan la aqbali. Sida aad koraan iyo bedesho sida qof si aad aad fikrado ku saabsan shukaansi. Had iyo dabacsanaan, Si kastaba ha ahaatee mar si aad uga shaqeysay waxa kugu habboon mar walba waxaan soo jeedinaynaa in ka dusin in xuduudaha kuu gaar ah la dhaqanka shukaansi. Markii aanu jebin tilmaamahayaga gaar ah leh waxay markasta ay ku soo noqonayso noo qaniini.